TOMATO "SUGAR BISON": SHARAXAAD KA MID AH NOOCYADA KALA DUWAN IYO BEERISTA AGROTECHNOLOGY EE LAGU KORIYO - NOOCYO YAANYO
Tamaandhiga "Sugar Bisis" way ka duwan tahay noocyo kale oo ka mid ah "qaraabada", waxayna heshay dib u eegis gaar ah oo ka yimid beeraley badan. Oo maanta waxaad baran doontaa sharaxaadda iyo codsiga kala duwan, iyo sidoo kale agrotechnology ee khudaarta sii kordhaya ee lagu koriyo.
Taariikhda ka saarida yaanyada "Sugar Bison"
Noocyo yaanyo ah "Sonkorta qamiis" ayaa soo saarey bannaanka beeraha ee Ruushka iyada oo loo marayo taranta. Diiwaangelinta Gobolka - 2004. Muddo bil gudaheed, khudradda ayaa caan ka noqotay dadka guryaha leh.
Tomato "Sugar Bison": dabeecad
Tomato "Sugar Bison" wuxuu leeyahay waxyaabahan soo socda Muuqaal:
Aragtida Stamba ee warshadda.
Waxaad ku kori kartaa dhulka u furan, laakiin waxaa fiican in lagu beero ee lagu koriyo.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fiiri qeybaha soo socda.
Ma taqaanaa? Si aad u qaaddo urka daroogada, qaado qubeyska casiir yaanyo.
Bushku wuxuu ku koraa mid aad u sarreeya (illaa laba mitir), miraha si fiican ayaa iftiimiya qorraxda. Duufaankii ugu horreeyay wuxuu bilaabmaa inuu ka sareeyo caleen toddobaad. Kuwa soo socda ayaa la sameeyaa iyada oo loo marayo laba qaybood.
Tamaandho "Sugar Bison" halkii aad u weyn iyo qaab ahaanba xasuuso wadnaha. Midabka miraha - raspberry-casaan ama casaan.
Tamaandhada caanuhu waxay gaarsiisan tahay 350 garaam, laakiin inta badan waxay miisaankeedu dhan yahay 250 g. Hase yeeshee, waxaa jira koox yahuudi ah: yaanyo bislaaday waxay gaari karaan 950 g. Waxaa jira toddobo qol oo yaanyo ah. Khudradda waxay ku jirtaa ilaa 6% ari qalalan.
Tomato "Sugar Bison" ayaa leh dhalid sare. Midhaha ugu horeysa ee soo jeedinta waxay ka muuqanayaan duurka ku dhawaad ​​saddex bilood ka dib biqilka. Laga soo bilaabo hal baadiyaha waa la soo ururin karaa ilaa 25 kg oo miraha ah iyada oo daryeel ku haboon. Tani waa xilli kaliya oo keliya!
Khudradda waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo casiir, saladh, baasto. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa cusub. Waxay u dulqaadanaysaa barafoobidda waxayna ku habboon tahay marinating iyo caanaha oo dhan.
Ka dib markii aan ka wada hadalnay isticmaalka yaanyo sonkor ah iyo sharaxaadda noocyada kala duwan, aynu ka hadalno faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka. Faa'iidooyinka:
Soo bandhigid miro badan.
Dhadhamin aad u fiican (oo aan u dhigmin milix la'aan oo leh qabow macaan).
Koritaanka xooggan ee yaanyada ee xaaladaha sii kordhaya.
Waxay u dulqaadaneysaa abaar.
Fuqan wanaagsan ee geedo.
Laakiin waxaa jira faa'iido daro:
Xaqiijinta nalalka iyo waraabinta.
Waxaa lagu koray koriyo.
Saameeyeen caleemaha bunni.
Wixii beerista ee lagu koriyo ah ku habboon noocyo kala duwan: "Budenovka", "Black Prince", "Honey drop", "Marina Grove", "Mikado Pink".
Waxaa fiican inaad u abuurto miraha kala duwan ee dhammaadka bisha Maarso ama horraanta Abriil. Haddii aad doonayso inaad ku korto tiro badan oo duurka ah, waxaad ku beeran kartaa sanduuqyo waaweyn, oo haddii aad haysato dhowr kalluun, ka dibna waxaa jiri doona kiniinno peat ah oo ku filan.
Si aad u abuurto isku dhafka dhulka, waxaad u baahan doontaa inaad isku dartid peat, carrada beerta, ash iyo qoryaha qoryaha (2: 1: 1: 1). Waxaad ku dari kartaa qadar yar oo potash ah iyo superfosphate.
Isku daridda dheriga dhulka waa in la gooyaa oo lagu dubaa boorso laba ah. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ka takhalusto bakteeriyada, miraha cawska iyo fangaska. Carabku wuxuu soo baxaa jajab, qoyaan-nuugista iyo neefta.
Geedka loo beeray waa in la dhigaa gelinka dambe ee daaqada dhinaca koonfureed, habeenkuna wuxuu ka baxaa daaqadaha. Heerkulka inta lagu jiro maalinta waa inuu yahay 22 ° C, iyo habeenkii - 18 ° C.
Laga bilaabo xilliga beereed waxaad ku waraabin kartaa geedo mar ama laba jeer. Quudin dheeraad ah looma baahna. In kiniiniyada peat ee siddeed loo qoondeeyey, kaliya saddex karaa jebin karaa.
Markii hore, tamaandhada "Sugar Bison" waxay doorbidayaan inay koraan oo lagu koriyo, halkaas oo qajaarka koray. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay keentay cudurka sida anthracnose. Ka dib markii in, bannaanka u badan beddeli ciidda ka hor beerto yaanyada iyo buufin ciidda leh xal sulfate copper.
Todoba maalmood ka hor beerashada geedo waxaad u baahan tahay inaad sariiraha u diyaariso. Waa inay ahaadaan 30 cm oo sare iyo 90 cm ballaaran, sidoo kale waxaad u baahan tahay inaad diyaariso dheecaan wanaagsan oo dhulka ku dheji.
Waxaa jira laba nooc oo mashruucyo abuur ah oo abuuraya - hal-line iyo laba-line. Qaabdhismeedka halbeegga ah waa 60 × 50 cm, labada-line mid waa 60 × 40, iyo inta u dhaxaysa khadadka soo degaya waa inaad ka tagtaa meel 75-95 cm oo bilaash ah.
Ka hor inta beerto geedo, ku shub ceelasha leh xal xal aan loo baahnayn oo ah kaneecada. Waxa kale oo aad ku dari kartaa waxyaabo kale oo dheellitiran organo-macdan.
Waa muhiim! Qalabaynta geedo waxaa la fuliyaa marka jirriduhu gaareen ilaa 35 cm ee dhererka.
Waraabinta iyo jaridda dhirta
14ka maalmood ee ugu horreeya ee duurka looma waraabin karo. Ka dib, in khudradda waa in si joogto ah loo waraabiyo biyo diiran. Daraasadku waxay u oggolaan doonaan xididada inay si fiican u neefsadaan oo u dhaafaan qoyaanka. Nidaamkan waxaa lagu fulin karaa iyadoo la isticmaalayo cutubka Fokin.
Foosha ugu horeysay waa in ay dhacdaa isla markiiba ka dib markii laga beerto geedo ee lagu koriyo. Hawlaha soo socda ayaa la sameeyaa labadii usbuucba mar. Xaq u yeelo si qoto dheer ah 5 cm. Wakhti ahaanba soo saar cagaarka, maadaama ay saameeyaan koritaanka iyo dhalidda yaanyada.
Quudinta koowaad iyo labaad ee yaanyada ee lagu koriyo oo la qabto laba toddobaad ka dib markaad dhicisid geedo. Si taas loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa xal augo ah doodwanaag leh oo lagu daro 50 g of ash.
Waa muhiim! Ha ku dhaafin tamaandhiyaha leh amooniyam amase mullein ka hor inta aan la siin miro. Qodob ka mid ah nitrogen wuxuu keenaa abuurista jirid xoog leh leh caleenta badan, halka dhalidda hoos u dhacaysa iyo jiri doona ubax.
Dharka ugu horeeya ee macdanta ayaa la sameeyaa 20 maalmood ka dib markaad dhashid. Waxaa loo isticmaalaa 1 tbsp. l nitrophoscopy on 10 l oo biyo ah Quudinta labaad waxaa la sameeyaa 10 maalmood kaddib marka ugu horeysa. Isticmaaley tan 1 tsp. potassium sulfate 10 litir oo biyo ah.
Laba toddobaad ka dib quudinta labaad, xalalka soo socda ee ash qoryaha iyo superfosphate waa in lagu daro (2: 1: 10). Si kor loogu qaado Bisaylka miro inta lagu jiro fruiting, bacriminta yaanyada leh isku dar ah nitrophoska, Humate sodium iyo biyo (1: 1: 10).
Yaanyada la karkariyey ee lagu koriyo waxay u baahan yihiin Bacriminta macdanta leh ee dheeraadka ah ee potassium, fosfooraska iyo nitrogen.
Dharka dabiiciga ah waxaa lagu dhaqaa ka hor inta aadan qaadan tamaandhada. Bacriminta potassium ayaa laga sameeyaa xilligii abuuritaanka ugxan-yari. Si aad u quudiso bacriminta noocan oo kale ah yaanyada waxay u baahan yihiin si ay u daaqaan miro.
Tamaandhada sidoo kale waxay ubaahantahay magnesium, boron, manganese iyo zinc. Boron wuxuu mas'uul ka yahay dalxiiska midhaha leh sonkorta iyo fiitamiinada, wuxuuna saameeyaa xajmiga iyo tayada haynta.
Magnesium wuxuu ka fiican yahay samaynta xilliga sii kordhaya, gaar ahaan xilliga abuurista ugxan iyo horumarinta yaanyada.
Manganese waxa loo baahan yahay horumar caadi ah iyo koritaan. Waxay ka caawisaa kordhinta caabbinta ee yaanyada cudurada.
Zinc caawisaa ma aha oo kaliya koritaanka firfircoon, laakiin sidoo kale in formation of miraha waaweyn iyo Bisaylkiisa hore.
Burburka Bush iyo Garter
Waxaan sii wadi doonnaa dhismaha baadiyaha iyo qoryaha. Aynu bilowno pasynkovaniya. Tani waa saarista caan ah ee caleemaha lateral.
Tan waxaa loo sameeyaa si loo hagaajiyo culeyska baadiyaha. Iyadoo tiro badan oo tallaabooyin ah, nidaamka xididku ma bixinayo caleemaha iyada oo nafaqo ku filan. Sidoo kale, tiro badan oo caleemo ah waxay keenaysaa in dhererka xad-dhaafka ah ee beerto iyo wareegga hawada oo liita inta u dhaxaysa duurka.
On stem ugu weyn ka tago dhammaan burushyada la sameeyay. Inta kale ee caleemaha iyo inflorescences ayaa la soo saaray toddobaadle. Si loo sii wado koritaanka aasaasiga ugu weyn uma baahna inuu ka baxsado cufka laabta caleenta.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo noocyada ugu wanaagsan, gaar ahaan beerista ee yaanyada cherry ee lagu koriyo iyo beerta furan.
Waxaad u baahan tahay inaad ku xoqdo dusha sare ee caleemaha ka dib ubaxyada furan on inflorescence sare. Dusha sare, ka tag laba qaybood, maaddaama ay siin doonaan khudradda leh nafaqooyinka.
Marxaladda xiga waa isku xirka. Buundada waxaa lagu xiraa siddeed dhibcood, trellis ama noocyo kale oo taageero ah. Maadaama ay kala duwan yihiin, waxay u fiicnaan lahayd isticmaalka trellis ah. Masaafada u dhexeysa waa inay ahaataa wax aan ka badnayn 30 cm, waana sariirta sariirta. On tiirarka, waxay fidin xadhiga iyo xir oo yaanyada leh qaybaha maro.
Sida hore loo soo sheegay, "yaanyada sonkorta leh" yaanyo iska difaaci karin cuduro kala duwan iyo cayayaanka, laakiin daryeelka caafimaad ee khaldan waxay la kulmaan cuduro badan iyo dulin.
Cudurada yaanyo waxay noqon kartaa mid kala duwan: Dillaaca xilliga dambe, kalluunka casaanka, Fusarium, Alternaria, cladosporia iyo anthracnose.
Dareeraha dambe ee yaanyada ayaa laga fogaan karaa. Si arrintan loo sameeyo, qudaar laga saaro barandhada oo si qoto dheer u qodo ciidda ka hor intaadan qaadan. Tamaandhada sidoo kale waxaa lagu daaweyn karaa 1% oo ah dareeraha Bordeaux. Waxaad isticmaali kartaa daawooyinka dadweynaha, halkii aad ka heli lahayd kiimikooyin. Tusaale ahaan, buufinta tincture toon.
Tamaandhada waxaa laga badbaadin karaa lowska cagaaran sida soo socota. tallaabooyin ka hortag ah:
Iska ilaali dhaawaca farsamada.
Bannaan duurka meelaha masaafada ah.
Iska daawee yaanyada leh "Faa'iidada dheeriga ah" ama "Bravo" fungicides.
Laga soo bilaabo fusarium caawin doonaa foosha qoto dheer iyo qodaya ciidda. U hubso inaad isticmaasho geedo caafimaad leh oo caafimaad leh.
Kahortaga Alternaria waa in la nadiifiyo haraadiga duurka iyo qoto dheer oo dhulka. Kalluunka caafimaad qaba waxaa lagu daaweyn karaa daroogada "Kvadris" ama "Tomato Saver".
Waxaad iskaga ilaalin kartaa cladosporiosis adoo ka saari doona hadhaaga dhirta dhintay. Tamaandhada waxaa laga badbaadin karaa anthracnosis iyadoo la adeegsanayo fungicides "Fundazol" ama "Idol".
Hadda ka hadal cayayaanka. Diiditaanka aqalka dhirta lagu koriyo ama diyaarinta bayoolojiga "Boverin" ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso cadaanka.
Caarada Spider waxaa la saaraa caawinta daroogada "Aktofit". Qalabka kiimikada iyo diyaarinta bayoolojiga Verticillin ayaa ka caawin doona aphids dhirta.
Ma taqaanaa? Yaanyo ma laha kolestarool, waxay ku jiraan fiber iyo fitamiin A iyo C.
Noocyo yaanyo ah "Sonkorta Qamiis" waxay leedahay faa'iidooyin badan. Waxaan kugula talineynaa beeritaankaaga beertaada si aad naftaada u siisid khudrado waxtar leh oo dhadhan fiican leh.